Nofap နဲ့နှစ်နှစ်ကြာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်! AMA: ED & သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Nofap နဲ့နှစ်နှစ်ကြာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်! AMA: ED & နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်မှု
nofap ၏ 100 + ရက်ပေါင်းထက်ပိုမိုရောက်ရှိဘို့သိကောင်းစရာများ။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရေးသားချက်များကိုရေးသားထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤသို့သောအကြောင်းအရာမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့ဖူးပါသလား။
သင်တစ်ဦး nofap လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထဲသို့ဝင်သောအခါသင်ဤလုပ်ချင်အဘယ်ကြောင့်ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏သင်သိသင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ရပ်များ၏အကြောင်းရင်းများကိုမှတ်မိနိုင်ရန်အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပနျးတိုငျသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အခုဆိုရင်လူအများစုကအပျိုစင်အပျိုစင်ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့လုပ်နေပုံရတယ်၊ ကောင်းတဲ့အဆုံးပန်းတိုင်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွေ့အကြုံကစိတ်ပျက်စရာတွေ၊ ဒေါသတွေထွက်စေပြီးသင်ဟာအထီးကျန်ဆန်မှုကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ အဆုံး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်တာကရေရှည်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုမပြောပါနဲ့ငါအမှားလုပ်မိတယ်၊ အခုငါကနေ့တိုင်းကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်မှုကိုခံနေရတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ လူတွေကဒီထူးဆန်းတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့မင်းကိုဖမ်းစားဖို့မင်းငါ့ကိုငါးတွေပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကမင်းကိုပိုကြီးတဲ့အုပ်စုထဲမှာပါ ၀ င်လို့порноနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအမြင်ကိုသင်စိန်ခေါ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကသင့်ကိုပျော်ရွှင်စေလိမ့်မယ်၊ ဒီလူတွေကမင်းရဲ့သူငယ်ချင်း၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိမ်းထားပါ။
အမြဲတမ်းအလုပ်များနေပြီးတန်ဖိုးရှိရှိအရာများနှင့်အလုပ်များနေမည်ကိုတဖြည်းဖြည်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အလုပ်လက်မဲ့လား ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုရေး။ အလုပ်လျှောက်ထားပါ။ ဆက်ဆံရေးရှာနေတာလား သူစိမ်းတွေနဲ့စကားပြောပါ၊ မိန်းကလေးလား၊ လူလားမပြောဘူး။ ကျပန်းစကားစမြည်ပြောဆိုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အချိန်ဆွဲမှုလျော့ကျသွားပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
ယခုတွင်သင်သည်စာမေးပွဲရက်သတ္တပတ်ကိုဖြတ်ကျော်နေရလျှင်သို့မဟုတ်သင်၌အလွန်ခက်ခဲသောသင်တန်းတက်နေလျှင်သင်သူတို့ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြီးမချင်း nofap ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ကျွန်တော်အကြံမပြုခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းပြချက်မှာ nofap သည်သင်၏ဘ ၀ တစ်မိနစ်တိုင်းကိုကြိုတင်သိမ်းပိုက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်၏ကျောင်း / တက္ကသိုလ်အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားမည့်အစား၊ r / nofap ကိုလှည့်စားပြီးမိန်းကလေးများကိုသာတွေးသည်။ သင်သည်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ နှင့်အထက်ပြည့်နေလျှင်သင်္ဘောကိုစွန့်ခွာ။ မသွားသင့်ပါ၊ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး မှနောက်တစ်ခုနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည် ဒါကြောင့်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ nofap ထဲဝင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့သင်အဲဒီကိုရောက်နေတာသေချာတာပေါ့။
အခုတော့လူတိုင်းနီးပါးအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာမေ့လျော့ကြောင်းတဦးတည်းအရာမှထွက်အလုပ်လုပ်သည်, အိမ်မှာနေတဲ့အားကစားရုံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သို့မဟုတ်ပဲလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက် sign up ကိုပါ။5ကြိမ်တစ်ပါတ် Go, သွားပါ / r / ကြံ့ခိုင်ရေး အဲဒီမှာပေါ်ရှိမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကပ်ပြီးမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်ပျင်းရိဆုံးအချိန်များ၌သူငယ်ချင်းများနှင့်အမြဲတမ်းတွဲနေပါ၊ ၎င်းသည် nofap နှင့် porn အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။
ယခု nofap လုပ်သောလူအများစုအတွက်ပထမလအနည်းငယ်အတွက်လွယ်ကူသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် fasm ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲအော်ဂဇင်ကိုပြင်းထန်စေသည်။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သင်၏ stash ကိုဖျက်ပစ်ပါ၊ ၎င်းသည် k9 blocker ကို install လုပ်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အရာ မှနေ၍ သင့်ကို porn လိုချင်လာအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ကြာသပတေးနေ့မှာသကြားလုံးတွေကိုဘယ်တော့မှမစားတော့ဘူး၊ နောက်အပတ်မှာပြန်ပြီးစားလိုက်ရင်မင်းပျောက်နေတာကိုအမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတာနဲ့ဆင်တူတယ်။
reddit အတွက်လည်း nsfw လင့်များပိတ်ဆို့နိုင်သည့် Reddit တိုးမြှင့် tool ကိုလည်းမရှိ။
စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ အခန်းကိုသန့်ရှင်းခြင်း၊ အ ၀ တ်လျှော်ခြင်းနှင့်သင်နှစ်သက်သောအခြားအရာများကဲ့သို့သောအခြားအရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အားကောင်းသောစွမ်းအားကိုတည်ဆောက်ပါ။
chains.cc နှင့်အစားအဲဒီမှာအတွက်အနည်းငယ်အစက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းလဲကြ wanking ၏ညစဉ်ညတိုင်း sign up ပြုလုပ်ပါ။
ဤအရာကိုတစ်ပါတ်ကျော်ကျော်ပြီးစွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဆောင်ပါ။ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာသင်ပြီးဆုံးသွားပြီးသည်နှင့်သင်ကပြားချပ်ချပ်ပြီးရင်လိင်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးသင်စွမ်းအင်ကိုသင်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်သင်ညစ်ညမ်းခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်စားခြင်းများကိုအသုံးမပြုပါ။ ။
သင်ကိုယ်တိုင်မလှည့်စားပါနှင့်၊ သင် porn သို့မဟုတ် edge ကိုကြည့်သည့်အခါတိုင်း ၅ ရက်လောက်ပြန်သွားသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူနှောင့်နှေးကြပါဘူး။
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုကုသပေးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။
သင့်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုများကိုပြန်လည်ပုံဖော်ပါ၊ ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ချိုနေတာလဲဆိုတာကိုတွက်ဆပါ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏နေ့စဉ်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသိမ်းဆည်းထားလျှင်၎င်း၊
ဒါကမင်းဘ ၀ မှာအရာရာတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့မှော်အတတ်မဟုတ်၊ သင်လုပ်နေတဲ့အရာကသင်ပုလင်းကွဲနေပြီး nofap ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပုန်းနေခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အမှားတွေကိုမင်းကိုနားလည်စေလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်၎င်းသည် matrix နှင့်တူသည်၊ မင်းကလူတိုင်းကိုကြည့်ပြီး 'hmm ... သူတို့အားလုံးအိပ်ကြပြီးငါနိုးလာပြီ' ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင် nsfw အကြောင်းအရာကိုတွေ့သောအခါ၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းသည်အစားအသောက်အလွန်အကံျွသောက်ခြင်းမှအစားအသောက်များစားသူတစ် ဦး နှင့်ဆင်တူသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ဝင်၍ ဆက်လုပ်ပါကဆိုလိုသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးနားလည်သဘောပေါက်သည်။
တစ်ညှစ်ဘောလုံးကို Get နှင့်သင်အနေနဲ့တိုက်တွန်း get အခါတိုင်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုလွှတ်ပေးရန်, ကလကိုပထမဦးဆုံးစုံတွဲ၌ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့ပုံရသည်။
ထို့ကြောင့်အိပ်ယာမ ၀ င်ခင်တစ်ညတွင်အဆုံးသတ်သည့်အဆုံးရလဒ်ကိုရှာဖွေရန်သင်၏အခန်းထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းထိုင်။ မနေပါနှင့်။ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ပြီးထွက်သွားပါ။ သင် fapping နှင့် porn အကြောင်းမေ့ရန် ပို၍ လွယ်ကူလေလေ၊ လူတွေအများကြီးနဲ့နေပါ၊
သငျသညျယောက်ျားတွေသင့်ကိုယ်ပိုင်များ၏အကြံပေးချက်များမှတ်ချက်များသို့ add ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်လျှင်။
Nofap နဲ့ငါ့ရုန်းကန်နှစ်နှစ်ပြီးနောက်! AMA ။
ကျွန်တော့်ကို Nofap ၏အစောပိုင်းကာလများမှသိရှိခဲ့သူများသည်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းပထမဆုံးလာရောက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ သည်မလုံလောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်။
ငါသုတ်ရည်လွှတ်လွှတ်ခြင်း, ED သွေးဆောင်သွေးဆောင်နှောင့်နှေးခဲ့သည် ... ငါ porn ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ပင်ခက်ခဲရနိုင်ဘူး။
ယခုငါအကောင်းဆုံးပုံသဏ္inာန်ရှိပြီ။ မကြာသေးမီကငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအချင်းချင်းချစ်သောဆက်ဆံရေးကိုရလိုက်သည်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောအလုပ်ရရှိထားသော်လည်းတစ်နေ့တာကိုဖြတ်သန်းရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသည်။
ကွန်ပျူတာကိုတတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးရှောင်ပါ။ Porn သည်အမြဲတမ်းအလိုဆန္ဒပြည့်ဝရန်အမြဲတမ်းသွားလိမ့်မည်။ ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့ဒီစွမ်းအင်ကိုအခြားအရာတစ်ခုခုဆီသို့လွင့်စင်သွားအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။